Trano - Cazoo
Tsotra be ny valiny, manome azy i Cazoo! nft.cazoo.it dia teraka tamin'ny fiandohan'ny taona 2022 noho ny fangatahan'ny vondrom-piarahamonina iray ihany, izay nitantana hatrany ny fangatahana fiaraha-miasa ...
Tohizo ny famakianaInona ny fanangonana NFT vaovao ho avy amin'ny 2022?
Tari-dalana feno amin'ny fahazoana mampiasa ny Binance
Andao hojerentsika izay Binance, ny fomba fampiasana azy ary ny fomba ahafahanao mividy sy mivarotra vola crypto miaraka amin'ity Exchange goavambe ity.
Tohizo ny famakianaTari-dalana feno amin'ny fahazoana mampiasa ny Binance
Ny Automated Market Makers dia manentana ny mpampiasa ho lasa mpamatsy vola ho takalon'ny ampahany amin'ny saram-pandraharahana sy ny mari-pamantarana maimaim-poana. Rehefa teraka tao amin'ny ...
Tohizo ny famakianaInona no atao hoe AMM, Automated Market Maker?
Ahoana no hahitana NFTs izay manao 100x?
Iza no tsy te hanao x50 na x100 miaraka amin'ny fampiasam-bola NFT? Na izany aza, saika sarotra kokoa noho ny amin'ny vola crypto, satria misy antony maromaro tsy manam-paharoa ...
Tohizo ny famakianaNFT: Torolàlana feno amin'ny fitadiavana ny 100x manaraka!
Tatitra isan-telovolana NFT 2022
Namaky ny tatitra farany momba ny Nonfungible izahay, natokana ho an'ny tontolon'ny NFT. Matoky an'i Nonfungible ve isika? Iza aho? Niorina tamin'ny taona 2018 tany am-boalohany mba hanaraha-maso ny varotra Decentraland amin'ny fotoana tena izy, ny orinasa ...
Tohizo ny famakianaTatitra NFT: 2021 dia taonan'ny fitomboana lehibe
Tondro tsy azo zahana (NFT) nandresy an'izao tontolo izao. Raha tsy mipetraka ao anaty lava-bato ianao, izay miharatsy ny wifi, dia efa henonao ity vaovao ...
Tohizo ny famakianaTsenan'i Binance NFT: Angona nataon'i Andy Warhol, Salvador Dalì
Ny fanavaozana farany an'i Metamask dia mahatonga ny fiainana ho mora kokoa ho an'ireo izay tia ny Binance Smart Chain: azo atao izao ny mifanakalo mari-pamantarana mivantana avy amin'ny birao na poketra finday. Ny Swap dia manambatra ny angona ...
Tohizo ny famakianaFanavaozana ny Metamask: Ampifamadiho ny Binance Smart Chain mivantana avy amin'ny kitapom-bolan'ny Metamask
India dia afaka nifindra mba hanasokajiana an'i Bitcoin ho sokajy fananana
Eny eny! India, izay nampiseho fankahalana be tamin'ny vola crypto tamin'ny voalohany, dia nanendry komity iray izay antenaina handefa volavolan-kevitra ho an'ny kabinetra tsy ho ela. Aorian'ny…
Tohizo ny famakianaIndia dia afaka nifindra mba hanasokajiana an'i Bitcoin ho sokajy fananana